Delta Air Lines: Kutsva kwekubhuka kwenyika dzakawanda kunowedzera 450 muzana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Delta Air Lines: Kutsva kwekubhuka kwenyika dzakawanda kunowedzera 450 muzana
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Ed Bastian, Mutungamiriri weDelta Air Lines
Kuvhurazve kweUS kunobata vatengi munyika makumi matatu nenhatu pasirese, neDelta ichishandira gumi zveaya asingamire uye nezvimwe kuburikidza neayo mahubs epasi rose ane chekuita nevabatsiri vayo.
Delta Air Lines yakaona kuwedzera kwe450% kwekuchengetwa kwepasi rose maringe nemavhiki matanhatu isati yatanga chiziviso cheUS.
Ndege zhinji dzepasi rese dzinotarisirwa kushanda zana izere neMuvhuro, Mbudzi 100, nehuwandu hwevatakuri mumavhiki anotevera.
Iko kudiwa kwakasimba kunoratidzwa kune vese vafambi nevafambi vebhizinesi kunzvimbo dzakakurumbira dzakadai seNew York, Atlanta, Los Angeles, Boston neOrlando.
Mumavhiki matanhatu kubva kuvhurwazve kweUS kwakaziviswa, Delta yakaona kuwedzera kwe450% mukubhuroka kwepasirese-yekutengesa maringe nemavhiki matanhatu chiziviso chisati chaitwa. Ndege zhinji dzepasi rese dzinotarisirwa kushanda zana izere neMuvhuro, Mbudzi 100, nehuwandu hwevatakuri mumavhiki anotevera.
Kuvhurazve kunobata zvakanaka vatengi munyika makumi matatu nenhatu pasirese, neDelta ichishandira gumi zveaya asingamire uye nezvimwe kuburikidza neayo mahubs epasi rose ane chekuita nevadyidzani vayo, kusanganisira Air France, KLM uye Mhandara yeAtlantic. Iko kudiwa kwakasimba kunoratidzwa kune vese vafambi nevafambi vebhizinesi kunzvimbo dzakakurumbira dzakadai seNew York, Atlanta, Los Angeles, Boston neOrlando. Pakazara, iyo ndege ichashanda nendege zana nemakumi matatu neshanu kubva kunzvimbo makumi mashanu neshanu dzepasirese munyika makumi matatu nesere dzinomhara muUS munaNovember 139, ichipa zvigaro zvinopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu.
"Uku ndiko kutanga kwenguva itsva yekufamba uye kune vanhu vazhinji pasi rose vasina kukwanisa kuona vadikani kwemakore maviri," akadaro. Ed Bastian, CEO weDelta.
“Kunyangwe takaona nyika zhinji dzichivhura miganhu yadzo kune vashanyi vekuAmerica munguva yezhizha, vatengi vedu vekunze havana kukwanisa kubhururuka nesu kana kushanyira US Zvese zvachinja izvozvi. Tinotenda hurumende yeUS nekubvisa zvirambidzo zvekufamba uye tiri kutarisira kubatanidza mhuri, shamwari nevatinoshanda navo mumazuva nemavhiki anotevera. "
Flight DL106 kubva kuSao Paulo kuenda kuAtlanta ichave iri ndege yekutanga yeDelta kusvika pasirese muUS pasi pemitemo mitsva nemusi weMuvhuro na09:35 paine gumi nevaviri kumashure.
Sezvo chivimbo chevatengi mukudzoka kwekufamba, Delta Air iri kuwedzera ndege munguva ino yechando kubva kumaguta makuru eEurope anosanganisira London-Boston, Detroit neNew York-JFK, Amsterdam-Boston, Dublin-New York-JFK, Frankfurt-New York-JFK neMunich-Atlanta.
Atlanta, nhandare yendege yeDelta, inoramba iri hub yayo yepasirese ine mafambiro makumi mashanu nenhanhatu zuva nezuva kuenda kunzvimbo makumi matatu nepfumbamwe. Inoteverwa neguta reUS rakashanyirwa zvakanyanya, New York-JFK, ine mazuva makumi maviri nemasere ekubva kumaguta makumi maviri nerimwe epasi rose.
Kuvhurazve kwakakosha kunosimudzira hupfumi hwenyika panguva imwe chete ichimaka kutanga kwekudzoreredzwa kwebhizinesi repasi rose reDelta. Ndege yakataura zhizha rino kuti bhizinesi rayo rekuzvivaraidza remuUS rakatokwira kusvika kumatanho a2019, asi zvirambidzo zvinoramba zvichienderera mberi zvakadzivirira kupora zvine musoro pasirese. Kufamba kwepasirese kunopinda kuUS kwakapa madhora mazana maviri nemakumi matatu nemana emadhora emari yekunze kuhupfumi hweUS, kwakaunza mari yekutengeserana yemadhora mabhiriyoni makumi mashanu nerimwe uye yakatsigira zvakananga mabasa eAmerica miriyoni imwe chete nemazana maviri muna 234.
Vekune dzimwe nyika vanozobvumidzwa kupinda muUS vaine humbowo hwekudzivirira uye bvunzo dzisina kunaka dzeCCIDID-19 dzakatorwa mukati memazuva matatu ekubva. Zvizvarwa zvekunze zvisina kubayiwa vanogona kupinda muUS chete kana vakazadzisa maitiro ekusarudzika zvishoma uye vakazvipira kuongororwa mushure mekusvika, kuvharirwa uye kubaiwa. Vatengi vanofanirwawo kupa ruzivo kuti vasangane neUS kuonana nekutsvaga zvinodiwa.
Vese vatengi vane makore maviri kana kupfuura vanofanirwa kupfeka chifukidziro chechiso murwendo rwose, nepo Delta's yakagadziridzwa hutsanana nhanho dzichiramba dziripo. Izvi zvinosanganisira kugara kucheneswa uye kucheneswa kwenzvimbo dzakakwirira-pamusoro mundege uye panhandare dzendege, pamwe nekupfapfaidza nemagetsi mukati mendege nemishonga yekuuraya utachiona hwepamusoro-giredhi kuti ive nechokwadi chekuti hapana nzvimbo isingaonekwe.